Gini mere I ghapu wepu aha gi taa | Martech Zone
Kwa ụbọchị, Martech Zone na-ezipụ ozi-e site na CircuPress nke na-agbanwe ndepụta blog na-akpaghị aka na email HTML nke ọma. E nwere naanị mmadụ ole na ole na-eji ya - akụkụ dị nta nke ndị na-agụ blog a kwa ụbọchị. Nke ahụ dị mma… ọ bụ niche ma na-azụ ndị chọrọ ya. Anaghị m anwa ịmepụtara ndepụta ahụ, ọ nwere nnukwu njigide ma na-eme aghụghọ maka ndị chọrọ blọgụ m na igbe mbata ha.
Email bụ push ahịa ọwa. Abụ m onye na-akwado nkwado azụmaahịa email dabere na ikike mana ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji email eme ihe ọfụma.
Ndị na-ere ahịa email anaghị atụ nke ha email ndepụta njigide, ha na-eleba anya na ole ole na ndepụta ahụ n'oge ọ bụla. Ihe nweta ndepụta gị nwere ike ịgafe njigide gị. Ọ bụrụ na ị na-enweta ọtụtụ ndị na-edeghị aha, ịkwesịrị idozi ihe n'oge na-adịghị anya.
Ndị na-ere ahịa email kwenyere n'ụzọ ahụ ala emeghe na ntughari dị mma mgbe ha dị elu karịa ụlọ ọrụ nkezi. Ndị mmadụ, ọnye pịa 4% nke email bụ ọnụọgụ ọdịda 96% na ọ bụghị ihe a ga-eme.
Ndị na-ere ahịa email na-enwekarị kalenda nke ahụ chọrọ ka ha bipụta, n'agbanyeghị ma ọdịnaya ahụ dị nzuzu ma ọ bụ na ọ bụghị. Ana m enweta ozi ịntanetị na igbe mbata m kwa izu ma ana m eche nke ọma otu ụlọ ọrụ ahụ si chee na enwere ihe na-atọ ụtọ iziga ya.
Ndị ahịa email kwenyere na email mgbakọ na mwepụ: Ọ bụrụ na mmadụ 10 zụrụ na ndepụta m nke 1,000 na email m kwa izu, enwere m ike ịre ahịa abụọ na email abụọ kwa izu. Ọ dị ka ibipụta ego. Mba… ọ bụghị. Ozi ịntanetị ndị ọzọ na-enweghị ike ịmalite ibute ahịa, mana ị ga-atụfu ndị debanyere aha bara uru.
Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ahịa email na-akụda, ọ ka na-efu ụlọ ọrụ nnukwu oge na ego iji zipu ozi-e. Agbalịbeghị m ịkwanye email m ma ọ bụ dozie ya n'ihi na ejighị m n'aka na ọ ga-eme nke ọma na ndị na-agụ ya. Ikekwe ọ bụrụ na m nwere ike iwepụta ọdịnaya dị na email ahụ n'okporo ụzọ - mana agaghị m ezipụ ozi ịntanetị nke na-adịghị mma n'ihi ịnwa inweta obere anya.
Ihe kachasị mma ị nwere ike ime maka ụlọ ọrụ na-eziga email crappy bụ wepu aha. Echerela ka email dịkwuo mma - zigara ha ozi taa. Hichaa igbe mbata gị.
Tags: circupressemail debanyere aha ndepụtandebanye aha emaildebanyere aha ndepụtawepu aha